सम्पत्तिको ऋण के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki सम्पत्ति क्रेडिट
तपाईंले एक किन्टी खरीद गर्न निर्णय गर्नुभएको छ?
त्यसपछि यो एक छ सम्पत्ति क्रेडिट, यस ऋणको लागि क्रमशः तपाइँलाई केही आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। यस्तो ऋण बैंकबाट अनुरोध गरिएको छ। अधिकांश मानिसहरू आफ्नै घरको बैंक छनौट गर्छन् किनभने यो बैंक पहिले नै आफ्नो वित्तीय स्रोतसँग राम्ररी परिचित छ। वस्तु ऋण वास्तवमा प्राप्त गर्न सजिलो छ। कुनैपनि अवस्थामा, तपाईंलाई बैंकमा अग्रिम आवेदन पेश गर्नु पर्छ। जो पनि सजिलै सँग एक सम्पत्ति ऋण प्राप्त गर्न निश्चित छ सुरक्षित पक्षमा।
यद्यपि, यो निश्चित रूपमा एक ऋण लिन सक्षम हुन एक स्थिर नौकरी चाहिन्छ। यस उद्देश्यको लागि, निश्चित अवस्थाहरू पूरा हुनुपर्छ। दुर्भाग्यवश, सबैले एक सम्पत्ति ऋण पाएनन्। यो क्रेडिट कम उच्च छैन। प्रायः तपाईले नयाँ निर्मित घरको लागी रोजगारी नगर्नु हुन्छ, तर केही समयको लागि पूरा भयो। अक्सर, घर वा वस्तु पछि पुन: परिष्करणको लागि खरिद गरिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो राम्रो अनुमान छ। तपाईंलाई यस्तो परियोजनाको योजना बनाउँदा के आशा गर्न जान्नुपर्छ। खास गरी पुरानो घरहरू अक्सर लागत जाल हुन बाहिर जान्छन्।
तपाईं त्यहाँ धेरै लागत हुन सक्छ कि अग्रिम योजना छैन। एक सम्पत्ति खरीद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ सँधै राम्रो सल्लाह खोज्न। यसको अतिरिक्त, तपाईले एक विशेषज्ञ किराया गर्नु पर्छ जुन गुणस्तरको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सक्दछ। सम्पत्ति ऋण कुनै पनि मामलामा सार्थक रूपमा स्वीकार हुँदैन। तपाईंलाई सम्झना छ कि तपाईं पुनरावृत्ति को लागि पनि धन को आवश्यकता छ। यो नविकरण अधिकांशका लागि एक राम्रो कुरा हो, र धेरै भवनहरूको लागि आवश्यक उपाय। कुनै पनि मौकाको लागि केही छोड्न इच्छुक छैन। प्रायः घर निर्माणकर्ताहरूले सम्पत्तिको ऋणको विरुद्ध निर्णय गर्छन्। किनकि यो केहि निश्चित परिस्थितियों संग सम्बन्धित छ। त्यसैले तपाईंले एउटा सम्पत्ति पुन: बहाल गर्नु पर्छ। आज त्यहाँ सम्पत्ति ऋण प्राप्त गर्न थुप्रै तरिकाहरू छन्। यदि तपाईं यस्ता वित्त प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई निश्चित रूपमा बैंक सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ। यसले जानकारी प्रदान गर्न सक्छ, चाहे यसले सम्पत्तिको ऋणसँग र काम गर्दछ, यद्यपि यो रकम कुन सम्भव छ। तथ्य यो हो कि सुरुबाट तपाईंले दुई पटक सोच्नु पर्छ कि तपाईंले ऋण खर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि छैन। उधार पैसा एक कुरा हो।
अर्कोतर्फ, तपाईं यो ऋण फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एकदम कुरा हो। बैंकहरू सधैं राम्रोसँग सुरक्षित र निश्चित रूपमा आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न चाहान्छ। क्रेडिट लिने व्यक्तिहरू सधैं सचेत हुनुपर्छ कि एक सम्पत्ति ऋण आज एक राम्रो समाधान हो। तपाइँ इन्टरनेटमा यस्तो ऋणको लागि पनि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ, तथापि, आवश्यकताहरू पनि पूरा हुनु पर्दछ। प्रायः मान्छे थाहा छैन कि यस्तो ऋणको लागी आवेदन गर्न अघि के आशा गर्न चाहानुहुन्छ। यो सबै खराब छैन।
निस्सन्देही यस्तो अवस्थामाका लागि बैंक सल्लाहकारहरू छन्। ग्राहकहरु को कुनै पनि प्रश्नहरु को उत्तर को लागि यो संधै उपलब्ध हुनेछ। कुनै पनि अवस्थामा, एक सावधान हुनुपर्छ कि क्रेडिट पनि सुरक्षित खुट्टामा छ। त्यसपछि यो योजनाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंको राम्रो काम छ भने सम्पत्ति ऋण प्राप्त गर्न सजिलो छ। त्यसपछि, कुनैपनि अवस्थामा, सबै सर्तहरू सही देखि सुरू हुन्छ। त्यसैले यस प्रकारको क्रेडिट प्राप्त गर्न निश्चित हुनेछ। प्रयोगकर्ताले भर्खरै फारम भर्नु पर्छ।
अघिल्लो लेखधन को प्रयोग
अर्को लेखव्यक्तिगत ऋण